Na-akpata ọgba aghara - Brasilia - Brazil - 1aviagem.com
Enwere 10.114 nwụrụ na 09/05/2020 (na ịrị elu), ndị a bụ naanị n'ihi COVID-19. Ndi oke a gbagoro agbagoro maka ndị chọrọ ihu ọnụ ọgụgụ ugwu ga-eme? Kedu otu ị ga - esi chekwa akụ na ụba na ndị ọrụ nwụrụ anwụ?
Kedu otu ị si adọta ndị na - etinye ego si mba ọzọ ma ọ bụrụ na ịchọrọ ijikọta ihe oyiyi ha na ọnwụ? Ha agaghị abịa, ha agaghị etinye ego na Brazil, maka gịnị? N'ihi nnukwu ihe iyi egwu nye mba ahụ. Onye isi ala nke na-akwado ịgbasa nghọtahie, na ọnwụ.
Calm obere bolsominion, onye kwuru na ọ bụghị m, bụ akwụkwọ sayensị sayensị The Lancet: "ihe kachasị n'ihe iyi egwu nzaghachi Brazil na covid-19". Akwukwo a na-egosi na onye isi ala ghaghi agbanwe iru ya ma obu ibu “onye ozo ilapu”…
O nwere ike ịbụ “ọ ka mma ka esi mara ya”. E kwuwerị, na Brazil, onye na-esote onye bụ onye na-edozi ya!
Kemgbe anyị ghọrọ mba, ọtụtụ ndị isi ala ewerela ma mechie ikike nke ndị isi. Mana ka ị ghara ịdị na-agwụ ike aga m ekwupụta ebe ọ bụ na 1988 (afọ nke iwu gọọmentị etiti nke isii na nke dị ugbu a ruo taa).
1- José Sarney, onye ketara ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ikike Tancredo Neves niile.
2- Itamar Franco onye jidere isi nke Onye isi ala merụrụ Impeachment Fernando Collor.
3- Michel Temer onye gha ejidekwa aka ma obu onye isi Ala Dilma Rousseff
Ha ga-kpogidere m n’egwuregwu Simpsons. Ma ọ bụrụ na ihe na-aga n’ihu dịka ha si dị…
4- Hamilton Mourão, gaa na-ekpo ọkụ-… ị nwere ike ịbanye n’ọhịa ahụ.
(Lee Vascão! Vicebụ osote abụghị ihe ọjọọ). (Ugbu a ha ga-atụ m nkume!).
Lee Rubinho Barrichelo, ịbụ osote dị mma dịka ịmalite!
Ọ dị mma, ịchị ọchị, enwere ndị osote mmadụ atọ nke ndị isi ise 3, n’atụleghị gọọmentị ugbu a. Naanị ndị isi abụọ kwụsịrị oge ha mgbe usoro iwu 5. Ha bụ: Fernando Henrique Cardoso na Luis Inácio Lula da Silva. Dịkwa ka a ga - asị na akụkọ ifo ndị a niile nke gọọmentị Brazil ezughị, ha ka nwere ikike abụọ zuru ezu!
N’ezie, akpọrọ m ha akụkọ ifo n’ihi na ha jisiri ike mebi polarity izizi nke Brazil sitere na iwu Café com Leite, nke gọọmentị tụgharịrị n’etiti Paulistas (kọfị) na Mineiros (mmiri ara ehi) na-anọchite kọfị na mmiri ara ehi na-emepụta mmiri.
(N’ezie, ị nụtụbeghị kọfị Brazil? Ọ dị mma nke ukwuu! N’etiti ndị kasị mma n’ụwa!) Na chiiz nke Minas? Ọ dị oke mma na akaụntụ "naanị".
Kwesịrị ikwu okwu
Youghọtara na ịnọ n'ụlọ (maka ndị nwere ike ịnọnọdụ) Ọ B HAVER HAVE LB LR L ND L (Ndụ nke 1) NA OU KWES SAR HAVE THEB THETA EGO. (na nke abụọ)
Maka ndị na - akwado President ahụ na - enweghị nsogbu, ìgwè mmadụ na - akpọkọta ndị na - alụ ọgụ maka ihe ọ bụla. Ndi n’agba mbo n’onye nkasi obi ma gbaa ndi n’elebara ndi nzoputa ala ha anya bu ndi ha chere na obu Chineke n’onwe ya (onye kwuburu na ya bu Mesaia, ma odighi oru ebube, ya onwe ya n’ezi ya! Kwere na ya! O buru na i kweghi na m, kwere na ya!) . N'ebe ndị a, m na-ahapụ ịkwa ụta m ... n'ihi na enweghị ọmịiko nke Onye isi ala na obi ọjọọ nke ndị agha ahụ KLLE ỌT MANT B ND B BRAZILIAN (Gụnyere ndị ntuli aka nke ya!) Gịnịkwa ka o kwuru?
Yabụ ọ bụrụ na, ọ bụrụ na iwepụta ọgụ, o setịpụrụ ihe atụ, ọ gaara abụ onye isi ala, onye ndu nke Brazil chọrọ. Ọ bụrụ na ọ kpuru nkpuchi na nzukọ, na-agbaso ntuziaka nke Minista Ahụike Luiz Henrique Mandetta, nke a agaghị eme. Ọ bụrụ na ọ gbasoro ntuziaka nke Minista Nelson ugbu a Nelson Teich, nke a agaghị eme. Ọ bụrụ na o gere ntị na WHO, nke a agaghị eme. Mana ọ naghị anụ onye na-eche ihe dị iche na ya. Ọ bụ ya nwe ọgụgụ isi mana ọ maghị etu esi aza ajụjụ. Ọ bụrụ na ha emee, ọ ka ga-emechi.
Okwu kwesịrị nke Eze (nke si Spen) “Gịnị kpatara ị naghị emechi emechi?”
Asi na o burula mmadu kariri mmadu ole… a gha enwe ndi nwuru.
Kama, onye isi ala, onye n’enweghi ogwu, na onye na-ekweghị na ọrịa na-ahọrọ ikwu na chloroquine bụ ọgwụgwọ iji buso coronavirus. (Ee, nke ahụ bụ eziokwu, ọ bụ ntakịrị oyi, mana kama phenol, ọ ka na-ede ọgwụ chloroquine, maka ọrịa ọ na-ekwenyeghị na ọ dị!). Ọ choro ịkpọ oku maka ngosipụta na ịkagbu ma gbaa ha ume ịrịọ imechi ike nke ọchịchị onye kwuo uche ya. Ọ dịghị anabataghị mmehie ya ma na-ekwu mgbe niile na ọ bụ ndị ọzọ na-egbochi ọchịchị ya "mara mma", mgbe n'ezie ọ bụ ya na-abanye n'ụzọ, mana ọ dịghị abanye n'ike n'ike. O nwere aka nke umuaka ya onye o jiri nchebe n’aka. 01, 02, 03… a chọpụtara na 04 na nso nso a. Ee, ọ bụ otu a ka ọ gụbara ụmụ ya ọnụ. Ọ bụ ihe jọrọ njọ, Jair, mana ọ bụ naanị ma ọ bụrụ na gọọmentị gị “Amamihe Ustra”. Ehee, ọ bụ eziokwu echefuru m na nke a bụ agụ ihe ndina gị. Ugbu a, ọ bụ ihe ezi uche dị na ya! 😜
"Eziokwu dara oke" (akwụkwọ Ustra) n'azụ "Mechie" maka ndị nta akụkọ. 🤫
Eduardo Bolsonaro, onye bụ otu n'ime ụmụaka ndị isi ala chebere, ekwuputala: "Imechi National Congress (ikike omebe iwu), onye agha na ụlọ ọrụ ezuru". Ya mere iji wụnye ọchịchị fascist. Ọ na - awakpo onye ọ bụla nke na - eche ihe dị iche na ya ma na - eduga nde ndị na - eso ya ime otu ihe ahụ.
Eche m na ọ chọghị fasizim. Ma m ga-asị na ihe ga-atọ gị ụtọ bụ ike ọchịchị aka ike.
Legodị ihe nlere nke mere ndị nọọsụ n'etiti ụbọchị onye ọrụ. N'ogbe nke ike atọ dị na Brasília, mgbe ndị nọọsụ na-ebugharị obe, na-echekwa ebe ha na-aga, na-eme nkpuchi, ha na-agbachi nkịtị, na-enweghị ndepụta okwu, na ha chọrọ icheta ọnụ ọgụgụ ndị nwụrụ anwụ (taa na 10.114) ma rịọ maka ọnọdụ ọrụ zuru oke. N'bọchị Ọrụ)
Gịnịkwa ka mmadụ abụọ n’ime ndị na-efe Jair Bolsonaro mere? (Ee, ndi na - efe ofufe, ebe apughi ikpo ha ndi na - akwado ya). Ha wakporo ndị nọọsụ wee wakpo ha n'ụzọ anụ na n'okwu ọnụ.
(Vidiyo ị nwere ike ịlele ebe a. E wepụtara ya na webụsaịtị Correio24horas)
Gịnịkwa ka onyeisi ala ahụ mere? Nke a na-emebu, "kpochapụrụ uwe" nwanyị ahụ na-eme ihe ike ma kwuo na ụlọ ọrụ mgbasa ozi "dị oke egwu" na ọ dịghị ka nke ahụ, na ha nwere ike mee ka mmadụ bata n'ime mmegharị ahụ. Emechara chọpụta na onye na-eme ihe ike bụ “nwanyị ọchụnta ego” bụ onye na-eme ngagharị iwe ugboro ugboro megide ọchịchị onye kwuo uche ya na ịkwado onye isi ala. Banyere ndị na-eji ike emegbu mmadụ, ha chọpụtara na ọ rụrụ ọrụ maka Ozi nke Ihe Ndị Ruuru Mmadụ. Eeh, nwoke ahụ na-eme ụdị ụdị ihe iwe a ma rụọ ọrụ maka Mịnịstrị nke ọrụ mmadụ. Ọ dịkarịa ala, a gbara ya egbe, mana ekwesịrị ijide ya.
Onye isi ala na-esote otu iwu ochie ahụ, na-ata ụta maka izu megide ya. Ihere na Jair Bolsonaro, kpasuo ndị ọrụ iwe, zọpụtara ndụ ya na ndọrọndọrọ, ọ bụ eziokwu a mechiri gị. N'oge nsogbu ahụ, ọ gaghị aga na arụmụka banyere ndụmọdụ ahụike. Mgbe ị natachara ọkwa onye isi, ị nupụrụ isi ntuziaka ahụike wee hapụ mmejọ ndị a ka ọ gafere kpọmkwem n'ụbọchị ọrụ?
Ọ bụrụ n'eziokwu na ọ bụ onye isi ala, ọ gaara ekwu, anyị ga-eme nchọpụta ma ọ bụrụ na ikpe mara, a ga-ata ha ụta dịka nke a agaghị eme ọzọ! Ọ gara soro ndị ọrụ na-arụ ọrụ.
Mana ihe ọ masịrị bụ "ịgafe nje" na mgbaghara nke pun.
Nkwupụta nke Onye isi ala nke Brazil na-agbaso.
(Ahụghị m onye chịkọtara nkwupụta ahụ na eserese nke ọnwụ COVID-19 iji nye otuto ahụ, mana ha, nkwupụta ndị ahụ, na-agagharị dị ka onye isi ala chọrọ.) Ọ bụrụ na onye ọ bụla maara onye mere onyinyo ahụ dị n’elu, kwuo okwu n’ebe ahụ. Maka ugbu a, m ga - ekwu na onyo a na - anọchite anya ihe onye isi ala chere.
M ga-echekwa nkenke mgbe m chetara na chụrụ ndị ozi Jair Bolsonaro ọkụ (nke a n'oge ọrịa) naanị n'ihi na ha na-eme ihe ziri ezi.
1- Onye Minista Ahụike (Luiz Henrique Mandetta) na-adọ aka na ntị na a ga-abawanye na usoro nke "oria" na ọnwụ na-esite na ya (taa na 10.114) ma ọ bụrụ na emeghị mwepụ mmekọrịta mmadụ. Ingdọ aka na ntị na ahụike ahụ ga-ada. (O ji obi ike na-enupụ isi n'okwu Onye isi ala ahụ na-agba ndị mmadụ ume ịga ọrụ ma na-ezukọta gburugburu ya). Na-arịọ Minista ahụike ahụike onye nwere ọzụzụ ahụike ma kwuo na chloroquine agaghị edozi ikpe Coronavirus n'ihi nsonaazụ yana otu okwu akọwapụtara na ya.
2- Onye Minista Ikpe na Nchebe Ọha nke Brazil (onye bụbu onye ọka ikpe, na onye bụbu minista) Sérgio Moro. A na-akpọkwa Car Car Court.
Ọ gbara arụkwaghịm maka ekwenyeghị na ntinye ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke President na Federal Police na nyocha ndị na-aga n'ihu, ọkachasị ụmụ nke Onye isi 01, 02, 03. Onye isi ahụ gbanwere Onye isi ndị uwe ojii nke Federal na-enweghị ọbụna ịgwa Mịnịsta Minista okwu ( Sérgio Moro) ma tinye akara mbinye aka nke Moro na arụ nke iwepụ Onye isi ndị uwe ojii.
Moro bụ otu n'ime ogidi ndị dugara Ex-President Lula n'ụlọ mkpọrọ, na Ex-President Michel Temer (onye nnọchite Dilma). O di nwute na Moro abughi onye ikpe Federal (you cheela echiche ịkwatu ndị isi atọ?) Mana na nkwupụta akụkọ ya ịhapụ, o mere ka o doo anya na onye isi ugbu a adịghị iche na amụma ochie. Ihe omuma ya na ijegharia ya bu: "Mee ihe kwesiri mgbe nile".
Ka anyị banye n'ozi ọma?
Ekele m diri ndị Brazil bụ ndị ghọtara na ụwa nwere ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-abụghị ihe isi ike, n'aka ekpe na aka nri! (Café com Leite; FHC e Lula; bisikiiti ma ọ bụ mgbawa). Will ga-abụ injin ga-agbanwe mba a. Na onye ọ bụla maara nke ahụ: “Changgbanwe uche gị dị mma, ọ bụ naanị nkịta enweghị ahụ.” (Onye Minista Carmen Lúcia kwuru.
EKPERE MAKA ndi mmadu na aru oru n’ime Gọọmenti ndi ji obi ha, ọgụgụ isi na sayensi mee ma mee ihe. Site na inupụrụ onye isi ala ahụ, ha mere ihe ziri ezi. I belatala ọnwụ ahụ ọtụtụ. Ha mere ihe kwere omume. Nke a gụnyekwara ndị ọrụ ọha na eze, ndị gọvanọ, ndị ozi na ndị isi ala.
EKPERE MAKA ndị ọrụ nwere ike ịhọrọ ma ka na-arụ ọrụ n'ụlọ. N’oge a siri ike nke iche na ime ka arụ ọrụ n’ụlọ, ọ na –eme nnukwu mgbanwe! Agbanyeghị na nke a dị ka njide ụlọ nwere ikike ịga ụlọ ahịa. Cheta na nke a anaghị adịte aka.
EMI m nwere ike inye ndị ọrụ na-enweghị nhọrọ ahụ tinyere onwe ya n'ihe ize ndụ ma yie ihe egwu iji gaa n'ihu n'ọrụ ha. O siri ike iru onye ọ bụla, mana m kwuru ụfọdụ ole na ole:
Ndi na asa ozu, ndi oria ugboala, ndi n’agba ugboala, ndi ugbo elu ugboala, ndi osi nri (ndi osi nri, ndi na ebe nchekwa ihe ndị ahịa ego nke ụlọ ahịa, ndị na - echekwa ụlọ ahịa na n'ezie, ndị ọrụ nhicha! Unu nile ndị tinyere ndụ unu n’ihe dị ukwuu karịa ihe ndị ọzọ dị mkpa, na mgbakwunye na ichekwa ezinụlọ unu, echekwala ọtụtụ ezinụlọ ndị ọzọ, site n’agaghị eri nri, site n’ịnọ na-ebubata akụrụngwa na nhicha. Ndi bu dike!
Ekele m na ụlọ ọrụ ndị na-egeghị onye isi ala ahụ ntị ma kwe ka ndị ọrụ rụọ ọrụ n'ụlọ. Ekele diri ndi oru IT nke choro uzo nke ihe a (Home Office)!
Ekele dịrị ndị mmadụ na ụlọ ọrụ nyere onyinye ma chọọ ịkwụ ụgwọ ụgwọ ndị ọrụ.
Maka ndị nka! Ewoo! Ndụ ndị mmadụ mere ka ọ dajụọ ma tinye ọnụ ọchị na ihu ha na-egosi na ọdịbendị dị mkpa n'oge a. Ekele m unu.
Ufọkabasi, temple, ụlọ nzukọ ndị mepụtara njikọta iji nyere ndị agụụ na-agụ agụụ na mkpa aka.
Emechakwara m ọkwa a ebe a, na-ekwu ntakịrị ihe gbasara ndọrọ ndọrọ ọchịchị na Brazil. Nke a bụ post mbụ m na-ekwughi maka njem, mana ọ dị m mkpa idobe nke ahụ. Pụọ!
Inwere onwe gị ikwenye ma ọ bụ kwenye n'ihe ederede a. Ọ ga - ekwe omume ịhapụ echiche gị n'okpuru. Mana ị ga - ahapụ Facebook wee banye ndụ n'ezie. Na ndụ okenye.
Ya mere sonyere. Zụlite.
Ezinụlọ nke 10.114 ndị emetụtara M na-ahapụ ọmịiko m. Ama m ihe ị gabigara. Amakwaara m ihe dị ka enweghị ike ịga olili ozu, ebe ọ bụ na ndị COVID-19 merụrụ ha ahụ. Nwee mmachi obi (mebere), ngụgụ obi na akụkụ nke post a bụ idebe aha gị! Onye isi ala na ndi mmadu na-efe ofufe n’enweghi obi ojoo. Nani nkasi obi nke elu igwe. Ọ na-echere maka ọrụ ebube ma sọpụrụ ncheta nke ndị lara.
Ana m ajụ ọzọ, ọ bụrụ na ịnwere ike ịpụ iche, nọrọ n'ụlọ. belata mgbasa, ka ị nwere ike bute ọrịa n’amaghị ama. Na ibunyekwa ndi n’enweghi obi uto dika nke gi. Ma na-enwe olileanya!
Ọrịa ọjọọ a ga-agafe! Anyị ga-enwe ike ịlaghachi hụ anyị.
Pụpụ ugbu a, iwepu ibu dị n'ụlọ ọgwụ (weghachite usoro ọ na-echeta?) N’oge na-adịghị anya, anyị ga-enwe ike ịhụ ibe anyị ọzọ, makụọkwa.
Nkuchi (mebere) 😷 jiri nkpuchi na #StayAtHome
akụkọ ihe mere eme Bolsonaro Brasil Coronavirus Covidien-19 Ya mere, gịnị jaia Ekele. president Onye isi ala